Download VLC media player for Windows 7 habsami leh
n 1.4 Play YouTube Videos in VLC
VLC waa ciyaaryahan caan ah oo warbaahinta ka mid ah dadka isticmaala ay. Waxaa deggan, iftiinka, iyo ciyaaryahan dabacsan warbaahinta la barbar dhigo xulalka kale oo badan. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ugu balaadhan looga isticmaalaa labada Windows iyo Mac.
Maxaad jecel aad ciyaaryahan VLC?
In badan oo naga mid ah ku odhan lahaa, maxaa yeelay, VLC taageertaa diyaariyeen ah ee qaabab warbaahinta, oo ay ku jiraan MPEG in qaabab badan oo waaweyn. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo waxay bixisaa dhowr warbaahinta ciyaaro ESPN, Reuter, Discovery, iyo National Geographic.
The horumarinta ee media player VLC siin joogto ah updates si loo hubiyo in weli maqal ah oo warbaahinta ciyaaryahan codsiga ugu wanaagsan oo dhan dhufto.
VLC media player waa laga heli karaa sida a free download. Waxaa jira ilo lagu kalsoonaan karo dhowr ah u soo degsado VLC.
Waa website-ka rasmiga ah ee ciyaaryahan VLC ka meesha aad kala soo bixi kartaa software ah. Bogga internet ku waa meesha ugu fiican ee dheeraad ah oo ku saabsan software news la xiriira oo la ogaado. Waxaad ka heli xaq u download link ka qaybihiisa.
Waa website kale, taas oo ah warar lagu kalsoon yahay u duuban VLC. Waa il caan ah oo soo degsado software. Waxa kale oo aad ka arki kartaa rating, faa'iidada, iyo nuqsaan, VLC ah. Waxaad ka raadin kartaa VLC on Google, oo waxaad ka heli doontaa link Softonic ee software-ka.
Downoad.com waa website caan ah oo og in ay dib u fiiriyaan oo wararka la xiriira software. Waxaad ka akhrisan kartaa warqad ka Editor, dib u eegista u arkaan, tilmaamaha gaarka u ah, file size iyo tirada downloads. Waxaad si toos ah kala soo bixi kartaa software ka website-ka si sahlan
File Hippos waa website la mid ah CNET iyo Softonic. Waxa kale oo ay ku siinaysaa faahfaahinta farsamada, isbedel log iyo comments user. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan software si faahfaahsan. Download link heli karaa midig ka profile software ah.
Website Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa dib u eegista iyo rating ee website saxda ah ka editor iyo macaamiisha faahfaahsan. Waxa kale oo aad ka arki kartaa version hore ee software-ka. Download link waxaa laga heli karaa midig ee bogga iyo qaadataa daqiiqado yar loogu rakibo.
Su'aalaha iyo Khaladaadka
1. VLC dhibaato warbaahinta ciyaaryahan xiritaanka
Waxaa laga yaabaa inaad ku arkay suuqa kala wada hadal ah "VLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa kala kulantay dhibaato oo u baahan in la xiro. Waxaan ka xunnahay wixii dhib ". Sanduuqa wadahadal Taas ka dib, VLC xirmin. Reinstalling software ma kaa caawin doona, waxaad yeelan doontaa in ay dheeraad yar. Dhibaatadaan baxdo sababtoo ah file qaabeynta kharribeen. Sidaa awgeed, waxaad u baahan doontaa si aad u nadiifiso qaabeynta iyo khasnado file. Waxaad ka heli kartaa files ee C: \_ Users \_ username \_ AppData \_ barqiyey vlc \_. Just tirtirto file vlcrc ah, iyo khasnado file. Tani waxay abuuri doonaa qaabeynta iyo khasnado files cusub.
Dhibaatada 1. Dhismaha Font Cache
Mar kasta oo aad isku dayaan in ay ciyaari file warbaahinta ah, waxa aad ka arki sanduuqa Building font wadahadal khasnado. Inta badan VLC tani dib u dhiska noocyada u subtitles in videos. Waxaad la xiro karo sanduuqa wada joogto ah. Tag menu qalab iyo hoos doorbidida tagaan oo ay u muuji Settings. Ballaariyo Video galo bidixda oo taga si subtitles / OSD. Beddel module text-haya'ad in beeneyda font renderer oo u badbaadin. Hadda isku day in la furo file ah oo fiiriya hadday sanduuqa wadahadal uu u muuqdo.
2. carar VLC on hab waafaqsan
Iyadoo daaqadaha 7 badan lahaa dhibaatooyinka waafaqsan u hureen. Tani waxay dhacdaa iyada oo version ka weyn ee software-ka. Haddii aad rabto in uu ordo VLC in hab waafaqsan, u tag icon VLC iyo xaq guji in ay doortaan waafaqsan dhibta. Saaxir Dhignaashada si toos ah u eegi doonaa arrimaha. Waxaad heli doontaa fursadahaaga, sidoo kale isku day goobaha lagu talinayaa ama barnaamijka dhibta. Sida caadiga ah, aad u tagto goobaha lagu taliyey iyo dooran version ku socon ee nidaamka qalliinka in ay maamulaan barnaamijka. Waa in ay ka shaqeeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aysan shaqeyn, isku day inaad khiyaar kale oo kaa dhex taxane ah tallaabooyinka iyo fursado kale oo u qaabeynta.
In kastoo VLC shaqeeyaa weyn, waxa uu had iyo jeer ku hadhay heer hoose ah in qaar ka mid ah dareenka. Iyada oo qalabka cusub iyo internet, ciyaaryahan aad u fiican ayaa laga heli karaa. Wondershare Player Waa ciyaaryahan cusub oo warbaahinta da in ay ka shaqeeyaan Mac iyo Windows. Waxay bixisaa taageero joogtada ah ee qaab kasta oo maqal ah iyo video ka downloads, warbaahinta duubay PC, DVD 's, casriga ah, kiniin ah, iyo qalab kale oo badan. Waxay si buuxda u fududayn kara waayo-aragnimo warbaahinta. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
- Waxay u ciyaaraa heerka iyo HD video s of qaabab sida mkv, mpeg, mp4, avi oo badan videos tayo sare leh. Wixii Cajalado, waxa ay taageertaa wma , mp3 , FLAC iwm Waxaad si fudud ku shuban kartaa dameer, SSA, SRT
- Wondershare Ciyaaryahan bilowdo mar waa hab yar in ciyaartoyda sida VLC, taas oo qaadata waqti aad u badan iyo xusuusta.
- Iyada oo sii kordhaya video qalab HD, waxaa bixisaa waayo-aragnimo video loo maqli weyn lahaa. , Ayaa midabo si faahfaahsan iyo mooshin waa u fiican. Waxa uu isticmaalaa codes sare iyo hardware GPU fiican in siinayaa ugu fiican video-aragnimo.
- Si ka duwan eegno heer hoose ah vlc, waxuu xanbaarsan yahay design dareen la badhamada multi-functional iyo navigation caqli badan.
- Waxaad bookmark karaa content aad jeceshahay si fudud u helaan iyo files waxaa si toos ah u abaabulan ee playlists. Waxaad isticmaali on qalabka oo dhan.
- Ma jiraan wax ad baaritaan pop iyo diiradda design aad siinaya waayo-aragnimo madadaalo fiican leh design uncluttered.
> Resource > Windows > Download VLC media player for Windows 7 habsami leh